Ogaden News Agency (ONA) – R/Wasaaraha Itobiya wareysigii ay Al-Jazeera la yeelatay maxaa laga fahmay
R/Wasaaraha Itobiya wareysigii ay Al-Jazeera la yeelatay maxaa laga fahmay
Posted by ONA Admin	/ December 9, 2012
Arimaha sida aadka u taageera qofka siyaasiga marka uu saxaafadda la hadlayo waa kalsoonida uu ku qabo naftiisa iyo umadda uu matalo. Wareysigii ay Jazeera la yeelatay R/wasaaraha cusub ee Itobiya Mr Hailemariam Desalegn waxaa ka muuqatay inuu ahaa shaqsi ay ka maqantahay kalsooni oo si aad ah isu ilaalinayay gaar ahaan markuu ka jawaabayay su’aalaha ku saabsanaa wadahadalkii dhex maray Itobiya iyo ONLF. Jawaabihiisa qaarkoodna waxaabad is-odhanaysay wuxuu ku hadlayay ereyo loo soo qoray oo ka tarjumaya diidmadii wafdiga ONLF uu diiday in shuruud looga dhigo wadahadalka nabadeed ogolaanshaha dastuurka. Wuxuu isku mid ka dhigay R/wasaaraha Itobiya ogolaanshaha dastuurka iyo Itobiyanimada. Mana odhan karno aqoon la’aan ayay ka ahayd ee waxay ka ahayd un kalsooni darro iyo inuusan ka horimaanin Janankii wadahadalka doonayay inuusan sii soconin ee shuruudaa ku xidhay.
Dastuur waa qodobo muujinaya habka xukunka iyo siyaabaha ay xukuumada u adeegsanyso awoodeeda (The constitution of a nation is the set of rules that govern how a government can exercise public power.). Dalal leh dastuur qoran iyo kuwa aan lahaynba way jiraan. Hasa ahatee inuu qof muwaadin ah ogolaado dastuurka dawladiisa shardi ma’aha, waxaana dhacda marka aftida loo qaadayo inay diidaan malaayiin muwaadiniin ah. Waqtigan xaadirka ah dastuurka Itobiya ee EPRDF ay qortay waxaan ogolayn qawmiyada badan oo ka mid ah shacabka Itobiya. Hadaba malaayiinta aan ogolaanin dastuurka markii aftida loo qaadayay iyo kuwa hadda aan ogolayn miyaa laga qaadi muwaadinimada? Waa wax lagu qoslo qof aqoon leh oo siyaasi ah inuu arimahaa ku hadlo. Waxaana u cadaatay wariyadii Jazeera ee R/Wasaaraha Itobiya uu horfadhiyay inuusan ahayn siyaasi fikir madaxbanaan kaga jawaabaya su’aalaheeda. Gaar ahaan habkuu kaga jawaabbayay dhowrkii su’aalood ee ku saabsanaa Wadadalkii Itobiya iyo ONLF ay ku yeesheen Nairobi oo hadalo ka horimanaya caqliga qofkii xataa aan la soconin arimaha dhabta ah ee ka jira Ogadenya iyo Itobiya.
Waxaa ka mid ahaa jawaabihiisa inay ONLF dhowr garab u kala jabtay oo qaar ay la socdaan Itobiya oo shacabka dhexdiisa uu dagaal ka socdo. Haddii la weydiiyo su’aasha ah ONLF ma waxay kala jabtay oy dhexdooda ka dagaalameen wadahadalkii ka dib? Hadaad ogaydeen xaqiiqada ah inay kala jaban yihiin, oo dagaal dhexdooda ka socdo oo shacabka uu la dagaalamayo, maxaad ula furteen Wadahadalka oo waliba uu ahaa heshiisku in lagu soo afjaro dagaalka raagay ee ka socda Ogadenya.
Xaqiiqada dhabta ah waxaa weeye, Itobiya siyaasad iyo caqli ma hogaamiyo. Itobiya waxaa xukuma oo ka taliya kana talin jiray jenenada ciidanka wata ee shacbka gumaada. Maadaama uu Meles Zanawi soo ahaa dagaalyahanadii TPLF jenenada TPLF ee xukunka Itobiya gacanta ku haya way ogolaayeen taladiisa, hasa ahaatee R/W Hailemariam Desalegn ee sida ku-meel gaadhka ah loogu dhiibay xukunka wuxuu agtooda ka yahay miskiin aan yeelan karin awood dhaafsan intay u ogolaadaan.